Orinasa fitaovana hafa - Mpanamboatra fitaovana hafa any Sina, mpamatsy
Anarana simika: 1,2-Propyleneglycol diacetate CAS NO.:623-84-7 Formula Molecular ： C7H12O4 Milanja Molekular ： 160 Famaritana endrika: fantsona mololo maloto tsy misy pentina: 160 Fahadiovana%: ≥99 teboka 101.3kPa）: 190 ℃ ± 3 Votoatin'ny rano%: ≤0.1 Teboka flash （kapoaka misokatra）: 95 value Vidiny asidra mgKOH / g: ≤0.1 Fanondroana réfractive （20 ℃）: 1.4151 Voninkazo mifangaro （20 ℃ / 20 ℃）: 1.0561 Loko （APHA）: ≤ Fampiharana 20 Famokarana volo ao anaty rano, famokarana mpamokatra rano, fametahana rano (Hydrophobic ...
Anaran'ny vokatra: Ethylene glycol tertiary butyl ether (ETB) CAS No. .: 7580-85-0 Formula molecular: C6H14O2 Lanjan'ny molekiola: 118.18 Toetra ara-batana sy simika Ethylene glycol tertiary butyl ether (ETB): akora simika biolojika, tsy misy loko sy mangarahara ranoka misy tsiro mintara. Ny soluble amin'ny ankamaroan'ny solvent organika dia afaka mamoaka amino, nitro, alkyd, acrylic ary resins hafa. Amin'ny hafanan'ny efitrano (25 ° C), dia mety ho diso amin'ny rano, ambany ny poizina, mora sosotra. Noho ny ...
Voasakana Isocyanate Crosslinker KL-120
Anarana simika: voasakana Isocyanate Crosslinker Fanondroana ara-teknika: fisehoana ranon-javatra manjavozavo mavo mavo Votoatiny mivaingana 60% -65% Votoatin'ny NCO mahomby 11,5% NCO mitovy 440 Viscosity 3000 ~ 4000 cp amin'ny 25 cp Density 1.02-1.06Kg / L amin'ny 25 ℃ 110-120 ℃ Ny fanaparitahana dia azo esorina amin'ny solvent organika mahazatra, fa koa miparitaka tsara ao anaty fonosana azo avy amin'ny rano. Fampiasana aroso: Aorian'ny fitsaboana hafanana, ny hainganan'ny sarimihetsika mandoko dia azo hatsaraina amin'ny alàlan'ny fampidirana azy amin'ny au ...
Resinina Amino hyper-Methylated DB303
Famaritana ny vokatra: izy io dia mpandraharaha mpampifandray volo marobe ho an'ny akora polymerika marobe, mety levona koa ny organo sy ny rano. Ny akora polymerika dia tokony ahitana na hidroksil, carboxyl na amide vondrona ary mety hisy alkyds, polyesters, acrylic, epoxy, urethane, ary cellulosics. Endri-javatra vokatra: Fahazaran-tsarimihetsika tsara hasiam-bokotra valiny haingana Fanasitranana tsy misy solvent afa-mifanentana malalaka sy tsy azo hamaivan-toerana Miorina tsara: Miorina ： ≥98% V ...
FAMPIANARANA OTENT OT75
Karazana vokatra: surfionant anionika Sodium diisooctyl sulfonate famaritana endrika ivelany: tsy misy loko mavo mangarahara misy rano mangarahara PH: 5.0-7.0 (vahaolana rano 1%) Penetration (S.25 ℃). ≤ 20 (vahaolana rano 0,1%) Votoatiny mavitrika: 72% - 73% Atiny mivaingana (%): 74-76% CMC (%): 0.09-0.13 Fampiharana: OT 75 dia mpandraharaha mandomando anionika mahery vaika miaraka amin'ny lena mando tsara, manalefaka ary emulsifying hetsika miampy ny fahaizana mampihena ny fihenjanana eo amin'ny sehatra. Amin'ny maha mpandraharaha mandomando azy, mety ho ...
Anaran'ny vokatra CAS NO. Fampiharana, lozisialy miharo volo, Hyper-Methylated Amino Resin DB303 - Famaranana amin'ny fiara ； Fandefasana kaontenera ； Famaranana metaly ankapobeny fin Famaranana mivaingana ； Famaranana nateraky ny rano ； Famonoana coil. Pentaerythritol-tris- (ß-N-aziridinyl) propionate 57116-45-7 Hatsarao ny firaiketan'ilay lacquer amin'ny substrates samihafa, hanatsarana ny fanoherana ny fikosehana rano, ny harafesin'ny simika, ny fanoherana ny hafanana ambony ary ny fanoherana ny fihodinan'ny loko voasakana Iso .. .
Akora ilaina: 3-Phenoxy-1-propanol Forma molecular: C9H12O2 Molekular lanja: 152.19 CAS NO .: 770-35-4 Index ara-teknika: Entana fanandramana endrika misy endrika indostrialy fisehoana ranon-javatra mavo mavo Assay% -90.0 PH 5.0-7.0 APHA ≤100 Fampiasana: PPH dia ranoka mangarahara tsy misy loko miaraka amin'ny fofona manitra manitra mahafinaritra. Izy io dia endrika tsy misy poizina sy milamina amin'ny tontolo iainana hampihenana ny loko V ° C miavaka. Toy ny mahomby emalesiona isan-karazany emulsion rano sy ny fanaparitahana coatings amin'ny gloss sy semi-gl ...
Pentaerythritol-tris- (SS-N-aziridinyl) propionate
Anaran'ny simika: Pentaerythritol-tris- (ß-N-aziridinyl) propionate Formate Molecular: C20H33N3O7 Milanja molekular: 427.49 CAS No .: 57116-45-7 Indeks teknika: fisehoana tsy misy loko amin'ny ranon-javatra mangamanga mavokavoka Mahavaky ny rano tanteraka ny rano amin'ny 1: 1 tsy misy stratification Ph (1: 1) (25 ℃) 8 ~ 11 Viscosity (25 ℃) 1500 ～ 2000 mPa · S Votoatiny matevina ≥99.0% Amine maimaim-poana ≤0.01% Ny fotoana ifandraisana dia 4 ~ 6 h fanoherana ny fikosehana ...
Akora ilaina: Ethylene glycol diacetate Molecular formula: C6H10O4 Molecular weight: 146.14 CAS NO .: 111-55-7 Index ara-teknika: endrika ivelany: ranon-javatra mangarahara tsy misy atiny: ≥ 98% Mamandoana: ≤ 0.2% Loko (Hazen): ≤ 15 Toakafo: saika tsy misy poizina, rattus norvegicus am-bava LD 50 = lanja 12g / Kg. Ampiasao: Ho solvent handokoana, fametahana adiresy ary famokarana striper. Mba hisolo ny ampahany na tanteraka ny Cyclohexanone, CAC, Isophorone, PMA, BCS, DBE sns, miaraka amin'ny fiasa manatsara ny haavo, manitsy ny s ...